Sabtida, Oktoobar 3, 2020 Sabtida, Oktoobar 3, 2020 Douglas Karr
Xaddiga shaqada ee lagu shubayo guryaha dhijitaalka ah iyo waxyaabaha aan run ahaantii wadin wax ganacsi ah waa maskax-kacsan. Xitaa waa wax laga xumaado dhanka adeegyada ee warshadaha halkaasoo macaamiisha ay ku adkeysan doonaan mashruuc si loo bilaabo goob, is dhexgal, ama adeeg… laakiin markaa maalgashi kuma sameyn doonaan waqtiga iyo tamarta si loo wanaajiyo isticmaalka bartaas. Ku-fiicnaantu waa sababta ugu weyn ee shirkadaha inta badan ugu fashilmaan inay xaqiijiyaan dib ugu soo laabashadooda maalgashiga.
Kameleoon waa hal madal oo loogu talagalay isuduwaha heerka isku-beddelka (CRO) laga bilaabo baaritaanka A / B iyo ku-habboonaynta shaqsi-ahaanta waqtiga dhabta ah iyadoo la adeegsanayo sirdoonka macmalka ah. Algorithms-ka mashiinka barashada mashiinka 'Kameleoon' wuxuu xisaabiyaa itimaalka badalashada booqde kasta (oo la aqoonsaday ama aan la magacaabin, macaamil ama rajo) waqtiga dhabta ah, saadaalinta iibsigooda ama ujeedka howlgalka. Tijaabada Kameleoon iyo Qalabaynta Shakhsiyadeed ee Kameleoon waa websaydh awood badan iyo tijaabooyin isdabajoog ah oo buuxa iyo madal gaar ahaaneed loogu talagalay milkiileyaasha alaabada dhijitaalka ah iyo suuqleyda doonaya inay kordhiyaan beddelaadyada isla markaana kexeeyaan kobaca dakhliga khadka tooska ah ee internetka. Iyada oo leh astaamo ay ka mid yihiin A / B
Waajibaadka Suuqgeynta Cusub: Dakhliga, Ama Kale
Shaqo la'aantu waxay hoos ugu dhacday boqolkiiba 8.4 bishii Ogosto, iyadoo Mareykanku si tartiib tartiib ah uga soo kabanayo masiibadii ugu xumeyd. Laakiin shaqaaluhu, gaar ahaan xirfadleyda iibka iyo suuqgeynta, waxay ku soo noqonayaan muuqaal aad uga duwan kii hore. Waana wax ka duwan wixii aan waligood horay u aragnay. Markii aan ku soo biiray Salesforce 2009, waxaan ku soconay cidhib-dhaqaale-xumo weyn. Maskaxdeena sida suuqleyda ah waxaa si toos ah u saameeyay suunka adkeeya ee adkeeyay adduunka oo idil. Kuwani waxay ahaayeen waqtiyo caato ah. Laakiin